Cap Liner, Heat Induction Chisimbiso, Seal Liner - Ziling Packaging
Yakadhindwa ine yakasarudzika trademark kana maslogani
Nekusimbisa, nebefu zvisimbiso
Akafarira zvakadzama nemazita akasarudzika.
Inyore kune akasiyana mafomu.
312020 / Gumiguru
Kunyorera Kunobatsira KweAluminium Foil Gasket Aluminium foil gasket inogadzirwa nealuminium mushure mekutsikirira uye wozoitwa zvinoenderana zvakasiyana zvinangwa. Inowanzo shandiswa mune mamwe ekurongedza maindasitiri kupatsanura mweya uye kuwedzera iyo s ...
Kupisa Induction Cap Liner Musika Kubata Yakakwirira Inogoneka Yekukura
Kupisa Induction Kapu Liner Musika Kubata Yakakwira Mikana Yekukura Kwekugadzira indasitiri yakaona kukura kunoshamisa mumakore mashoma apfuura nekuda kwekuwedzera kudyiwa kwezvinhu zvakapakurwa pasi rose. Mamirioni ezve zvigadzirwa ...
292020 / Gunyana
White Cross-inosungirirwa Polyethylene Foam Gaskets Yakavharwa sero muchinjikwa yakabatana polyethylene furo inogona kugara iri imwe yeakanakisa furo gasket zvinhu. Iyo polyethylene furo ine maviri akakura zvikamu - kemikari muchinjikwa-wakabatanidzwa polyethylene furo ...